akukho qa li-agile
Eyona Agile Akukho QELA QA kwiAgile
Akukho QELA QA kwiAgile
I-Agile imalunga nokusebenza ngokubambisana nabantu abanezakhono ezahlukeneyo kunye neengqondo zokufezekisa injongo efanayo.
Xa sijonga iqela lesikram eliqhelekileyo, liqukethe abaphuhlisi (bobabini umphambili kunye nomva wokugqibela), ii-QAs kunye nenkosi yesikram.
Kuyandothusa xa abanye abantu abangabameli be-agile abaneminyaka emininzi yamava besebenza kwiindawo ezi-agile besabhekisa ekubeni nokuba nokwakha iqela le-QA ukuxhasa iiprojekthi ze-agile.
Xa siqala ukubhekisa kwiQA njengeqela, ngokukhawuleza yenza ukwahlula phakathi kwabaphuhlisi kunye nabavavanyi kwaye isuse uxanduva lwabaphuhlisi abasebenza ngokuzimisela kwabo ukuvavanya owabo umsebenzi kunye nokuvelisa ikhowudi esemgangathweni, kuba kukho 'Iqela leQA' eliza kusebenza Kunzima ukufumana zonke iibugs kwinkqubo.
Le modeli yokusebenza ifana nengxangxasi kunye neeprojekthi ze-V-imodeli yokuphosa ikhowudi 'engaphezulu kodonga' evelisa isoftware esemgangathweni ophantsi, eyona nto iphambili kuyo ziindlela zokulungisa!
Kwiiprojekthi ze-agile, i-QA kufuneka ibe ingene kumaqela eskram kuba ukuvavanywa kunye nomgangatho ayisiyiyo eyokucinga emva. Umgangatho kufuneka ubhakwe kwasekuqaleni.
Ngokwakha iqela leQA, siba semngciphekweni wokwahlula abavavanyi kwincoko ebalulekileyo nabanini bemveliso, abaphuhlisi, njl.
Abavavanyi banokongeza ixabiso elikhulu kumgangatho weprojekthi xa bethatha inxaxheba kwiintlanganiso zokucwangcisa i-sprint, iivenkile zomsebenzi wesisombululo, kunye nokudibanisa nabaphuhlisi ukuqinisekisa ukuba ikhowudi ivavanywa ngovavanyo olulungileyo nolunentsingiselo.
Ii-QA zobuchwephesha ezifakwe kumaqela agile anokunceda kwiimvavanyo zokuzenzekelayo Kunye nophuhliso Ukuqinisekisa ukuba izinto ezintsha zisebenza njengoko bekucwangcisiwe.
Eminye imibutho inomsebenzi we-QA kunye noMphathi we-QA apho inani leengcali zovavanyo zibonelela ngovavanyo ngokubanzi, isicwangciso, isikhokelo kunye nendlela yokuvavanya kwii-QAs kumaqela agile .
Umsebenzi we-QA awunxibelelananga ngokuthe ngqo kuwo nawaphi na amaqela agile kodwa usebenza njengee-SME kumaqela ahlukeneyo kwaye unoxanduva lokukhuthaza ezona ndlela zilungileyo zokwenza isoftware esemgangathweni.
Ii-QAs kumaqela e-agile ziyakhuthazwa ukuba zibe lilizwi le-QA kumaqela abo, baqinisekise ukuba iqela labo lilandela ezona ndlela zibalaseleyo njengoko kumiselwe ngumsebenzi weQA kwaye basebenzela Uvavanyo oluqhubekayo .
Ke, kwimibutho ye-agile, endaweni yokuthetha 'ngokuba neqela le-QA' mhlawumbi kufanelekile ukuba sibhekise kubo ukwakha umkhuba weQA kunye nokuziqhelanisa neQA elungileyo kuya kuthetha ukuba iiQAs kufuneka zingeniswe kumaqela agile aqinisekisa umgangatho kuphuhliso lwesoftware.
galaxy s10 kunye neengcebiso kunye namacebo
I-malware eyoyikisayo ye-Android ijolise kumakhulu eeapps ezithandwayo, kodwa akufuneki uzicime zonke
I-Apple iPad 8 vs iPad Air 4: Yeyiphi oyifunayo?
Uyivula njani i-iPhone ene-Apple Watch egcina imaski yobuso bakho ivuliwe
IOS 15: IApple yazisa ngemowudi engaphazamisiyo, Isishwankathelo sesaziso
Inguqulelo kaGoogle Chrome yamva nje ye-Android ineendlela ezimbini zokuphucula
IMoto Z Dlala ukuze ufumane uhlaziyo lwe-Android 7.1.1 Nougat, nangona i-Motorola ayazi ukuba nini
I-Apple iPhone 8 Plus vs Samsung Galaxy S8 +
I-Google Pixel XL yoqobo isenokuba kukuthengwa okukuko ngexabiso eliphantsi lama- $ 200 (elitsha-elitsha)
Nantsi i-Samsung Galaxy Note 9 S Pen vs Qaphela 8 S Pen umfanekiso
I-LG V20 iqala ukufumana uhlaziyo olungalindelekanga lwe-Android 9.0 Pie